Warbixin: Kooxaha Liverpool & Arsenal Oo Durba Kasii Fakaraya Iney Xagaaga Soo Aadan Soo Xerogaliyaan Ivan Rakitic | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Warbixin: Kooxaha Liverpool & Arsenal Oo Durba Kasii Fakaraya Iney Xagaaga Soo Aadan Soo Xerogaliyaan Ivan Rakitic
Kooxaha Liverpool & Arsenal ayaa ku dagaali doona saxiixa xidiga khadka dhexe Barcelona Ivan Rakitic kaas oo la fahamsan yahay inuu isaga tagi doono garoonka Camp Nou xagaaga soo aadan iyadoo loo sababeynaayo imaatinka Philippe Coutinho.
Kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ayaa aduun dhan 142 Malyan oo Pound kusoo iibsatay xidiga reer Brazil ee Philippe Coutinho, waxaana la fahamsan yahay inuu badal guuleysto u noqon karo Andreas Iniesta oo ku jira waqtiyadiisii ugu dambeeyay kubadda cagta.
Sidoo kale waaxaa la fahamsan yahay in Coutinho uu cadaadiska ku badin karo Ivan Rakitic, iyadoo wiilka reer Croatia uu durba go’aansan karo inuu isaga guuro hadii uu kursiga keydka daris la noqdo marar badan.
29-jirkaan waxaa la fahamsan yahay inuu durba kasii fakaryo halkii uu u dhaqaaqi lahaa xagaaga soo aadan, shabakadda Diario Gol ayaana baahisay in Liverpool & Arsenal ay durba xiiseynayaan si la mid ah Juventus.
Labada kooxood ee Premier League waxey ku xirnaan doontaa sida ay diirada u saari doonaan, xidigaha baaqiga kusii ahaada kadib koobka Aduunka ee Russia ka dhici doona.